स्थानीय चुनाव : विराटनगर महानगरपालिका विशेष
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला विराटनगर महानगरपालिकामा आफ्नो उम्मेदवार जिताउने भरमग्दुर प्रयासमा छन् । नागेश कोइरालाई उम्मेदवार बनाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएका कोइरालाई विराटनगरमा जीत निकाल्नु पार्टीभित्रै प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । कांग्रेसको बाहुल्य रहेको विराटनगरमा एमालेले पनि जनतामा भिजेको उम्मेदवार खडा गरिदिएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ ।
पार्टीमा संस्थापनइतर खेमाको नेतृत्व गरिरहेका डा. कोइरालासँग विराटनगरको चुनावी माहोल, देशव्यापी चुनावी गठजोड र सम्भावित नतिजाका बारेमा विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा पुगेर लोकान्तरका विन्देश दहाल र उद्धव थापाले अन्तर्वार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
विराटनगरको चुनावी माहोल कस्तो देखिरहनुभएको छ ?
बिस्तारै तातिरहेको छ । स्थानीय निर्वाचन भएकाले स्वाभाविक रूपमा वडाहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । वडावडामा जाँदा चुनाव प्रचारप्रसार भइरहेको देखिन्छ । बजारमा घुम्दा नदेखिन सक्छ । चुनावको गर्माहट बिस्तारै बढ्दैछ ।
विराटनगरको मेयरको उम्मेदवार बनाउनका लागि तपाईंले पार्टीभित्र निकै रस्साकस्सी गर्नुभयो । नागेश कोइरालालाई नै उम्मेदवार बनाउन जोडबल गर्नुको कारण के हो ?
हेर्नुस्, मेयरको उम्मेदवार एउटै व्यक्ति बन्ने हो । यसअघि पनि आकांक्षीहरू धेरै थिए, अहिले पनि धेरै थिए । तर, पाउने एउटैले हो । नेपाली कांग्रेस जस्तो दलमा तपाईंले मेयरको उम्मेदवार दोहोर्‍याइरहनुभयो भने त्यसले पार्टीलाई नोक्सान गर्छ । निवर्तमान मेयरले राम्रो काम गर्नुभएको छ । तर उहाँलाई नै दोहोर्‍याउने हो भने उहाँपछिका मानिसले अवसरै पाउँदैनन् ।
त्यसलाई विचार गर्दै नयाँनयाँ मानिसलाई हामीले अवसर दिनुपर्छ । अनि अर्को कुरा, जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि सत्ताविरोधी सोच (इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर) हुन्छ । यी सबै कुरालाई विचार गरी मैले पार्टीमा कुरा राखें । अनि सभापतिजी र अन्यले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुभयो ।
विराटनगरका मतदाताले नागेश कोइरालालाई मेयर बनाउनका लागि किन भोट हाल्ने ? उहाँमा तपाईंले देख्नुभएको विशेष क्षमता के हो ?
अहिले नेपालको बुद्धिजीवी तथा युवा वर्गलाई सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारको वृद्धिले चिन्तित पार्ने गरेको छ । नागेशमा सुशासनप्रतिको लगाव छ । उसले फिलिपिन्सको अमेरिकन युनिभर्सिटीबाट जनप्रशासन विषयमा मास्टर्स गरेको हो । नागेशले भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने कुराको कल्पना पनि विराटनगरवासीले गर्न सक्दैनन् ।
त्यति मात्र योग्यताले पुग्दैन होला नि त । विराटनगरको समृद्धि र विकासका कुरा पनि आउलान् ।
समृद्धि र विकास नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमै आएको छ । हामीले सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर घोषणापत्र बनाएका छौं । त्यसमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखिएको छ । विराटनगरमा पनि त्यसलाई जोड दिइनेछ ।
अर्को कुरा, विराटनगर पहिलेदेखि नै राजनीतिक राजधानीका रूपमा चिनिएको छ । प्रथम औद्योगिक नगरीको रूपमा विराटनगर परिचित छ । अहिले त्यो ओझेलमा परेको छ । विराटनगरलाई नयाँ तरिकाले औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल इकोनोमिक जोन) बनाउनुपर्छ ।
उद्योग स्थापना गर्न हामीसँग ७०० बिगाहा जति जमिनहरू छन् । यस्तो आर्थिक क्षेत्र बनाउनका लागि संघीय सरकारलाई झक्झक्याउने काम नागेशको टीमले गर्नेछ ।
विराटनगरमा कांग्रेसको पोजिसन कस्तो पाउनुभएको छ ?
कांग्रेस अहिले लीड गर्दैछ र त्यो क्रमशः बढ्ने क्रममा छ । टिकट वितरणका क्रममा केही तिक्तताहरू देखिएका थिए । त्यो स्वाभाविक हो । अहिले हामी असन्तुष्टहरूलाई सम्झाइरहेका छौं । उहाँहरूलाई हामी मनाउनेछौं । त्यस असन्तुष्टिले वडाको चुनावमा असर गर्छ जस्तो लाग्छ तर मेयरको चुनावमा त्यसले फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तैपनि हामी सतर्क हुनुपर्छ ।
विराटनगरको मेयर जिताउने कुरा पार्टीभित्र तपाईंका लागि प्रतिष्ठाकै विषय बनेको छ होइन ?
यो प्रतिष्ठा भन्ने कुरा मिडियाले भनिदिने रहेछ । कोइरालाको विरासत भन्ने कुरा आउँछ । म यसलाई धेरै महत्त्व दिन चाहन्नँ । हामीले त काम गर्ने हो । अहिले नागेशजी हुनुहुन्छ, पहिला भीमजी हुनुहुन्थ्यो । भीमजीका लागि पनि म अहिले जति नै खटेको थिएँ । यो मेरो संसदीय क्षेत्र पनि हो । त्यसैले यहाँ नेपाली कांग्रेसलाई स्थानीय चुनाव जिताउनु मेरो पनि जिम्मेवारी हो ।
तपाईं पार्टीमा एउटा खेमाको नेता हुनुहुन्छ । सभापतिलाई तपाईंले चेक यान्ड ब्यालेन्स गरिरहनुभएको छ । तर, अहिले निर्वाचनमा सभापति जस्तै देशव्यापी रूपमा घुमिरहनुभएको चाहिँ छैन, किन ?
यो त स्थानीय निर्वाचन हो । यसमा स्थानीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र संघीय चुनावका लागि यो स्थानीय निर्वाचन सर्वेक्षण र प्रिफाइनल जस्तो हो ।
देशभरि घुमेर लोकप्रिय हुन्छु भन्ने बेला हैन यो । आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँमा तपाईंले प्रभाव कायम राख्नुपर्‍यो । स्थानीय चुनावमा असन्तुष्ट हुने, बागी बन्ने धेरै हुन्छन् । उनीहरूलाई सम्झाउने जिम्मेवारी मैले नै लिनुपर्छ । म अरू जिल्लामा गएर सम्झाउन सक्दिनँ, त्यहीँको नेताले सम्झाउनुपर्‍यो नि त । त्यो कुरा बुझेरै म यहाँ बसिरहेको छु । तर प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा त म देशभरि घुम्छु ।
पार्टीभित्र तपाईंहरूले चुनावी गठबन्धन गर्नुहुँदैन भनेर सशक्त आवाज उठाइरहनुभएको थियो, अहिले गठबन्धन भयो । स्थानीय तह निर्वाचनको यो गठबन्धनले कांग्रेसको शक्ति क्षयीकरण गराइरहेको भन्न मिल्छ ?
एउटा समयसम्म हामीले गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्यौं । तर पार्टीले निर्णय लिइसकेपछि पार्टीको एक अनुशासित क्याडर भएको हिसाबले निर्णयलाई स्वीकार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । क्षयीकरण भन्ने कुरा भोलिको नतिजाले बताउँछ । तर कतिपय जिल्लाहरूमा क्षेत्रीय सभापति भइसकेका साथीहरूले राजीनामा दिनुभएको सुन्दा नरमाइलो पनि लाग्छ ।
वर्षौंवर्ष कांग्रेसलाई योगदान गरेका साथीहरूले राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँहरूलाई अहिले फोन गरेर सम्झाउँदैछु । चुनावपछि भेटेरै सम्झाउनेछु । साथीहरू पार्टीमा फर्केर फेरि आउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले पनि क्षयीकरण भएको हो कि हैन देखाउनेछ ।
तपाईंलाई देशभरिबाट रिपोर्टिङ आइरहेको होला । त्यसले कांग्रेसको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ ?
गठबन्धनको मर्मलाई नेपाली कांग्रेसले वास्तवमा पालन गरेको छ । तर अन्य दलले त्यसलाई पालन गरेनन् । धेरैतिर हामीले पहिले जितेका ठाउँहरू छोडिदियौं । त्यो गलत भयो । जितेको ठाउँलाई हामीले आफूसित राखेर एमालेले जितेको ठाउँमा गठबन्धन गरेको भए त्यसले राम्रो सन्देश दिन्थ्यो ।
दोस्रो कुरा, गठबन्धनले देशभरि महिलाहरूको राजनीतिक आकांक्षामा कुठाराघात गरेको छ ।
तेस्रो कुरा, केही जिल्लामा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएपछि सभापतिजीले चिट्ठी लेखेर उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाउनुभयो । ५ बजेपछि त्यो चिट्ठी निर्वाचन आयोगमा पुग्छ अनि सभापतिजीले दबाब दिनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारी त रहिरह्यो नि । त्यो उम्मेदवारको स्थिति कस्तो भयो होला ? गठबन्धनका अन्य घटकले नेपाली कांग्रेसको मर्मलाई बुझ्न सक्नुभएन ।
एमाले तपाईंहरूको प्रतिस्पर्धी हो । अहिले तपाईंहरूले गठबन्धन गरेका कारण जन्मेको असन्तुष्टिले गर्दा देशभरि नै एमालेलाई फाइदा गर्न सक्ने आकलन पनि कतिपयले गरिरहेका छन् नि ।
हैन, गठबन्धन गरेका दलहरूले आआफ्नो सीट इन्ट्याक्ट मात्र राखे भने पनि राम्रै हुन्छ । विराटनगरकै कुरा गर्दा, नेपाली कांग्रेसको मेयर र जसपाको उपमेयरको आफ्नो भोटका साथै दुवै पार्टीको भोट अलिकति भए पनि ट्रान्सफर भएमा सकारात्मक परिणाम आउँछ नि त ।
त्यसो भए देशभरि जहाँ पनि गठबन्धन भएको छ, त्यहाँ सफल भइन्छ भन्ने तपाईंको आशय हो ?
म त्यो भन्दिनँ । हाम्रा आआफ्नै विचारधारा छन् । राष्ट्रियताका सवालमा कांग्रेस र कम्युनिस्टका फरक विचारधारा छन् । समाजवादमा पनि हामी लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छौं । उनीहरू लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा नै मान्न तयार छैनन् । तर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा म रहन्छु । केन्द्रबाट गठबन्धन लाद्ने कुरालाई म विरोध गर्छु ।
चितवनमा गठबन्धनको बृहत् आमसभामा सभापतिले तपाईंलाई बोलाउनुभएको तर तपाईं नगएको कुरा सुनियो । चितवन किन जानुभएन ?
चुनावको बेलामा आजको भोलि नै आइज भनेर हुँदैन नि । मोरङको २ नम्बर क्षेत्र मेरो हो । यहाँ मेरा धेरै कामहरू थिए । माओवादीबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नुहुने साथीहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रममा म व्यस्त भएँ । दुःखदायी कुरा पनि भएको छ । नेपाली कांग्रेसको सर्कुलरमा हाम्रो नाम कतै देख्नुभएको छ ? अनि सभापतिजीले भन्नेबित्तिकै मान्छे सर्लक्क गइहाल्छ र ?
चितवनमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार उठ्नुभएको छ । त्यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
जगन्नाथ पौडेलजी निकै पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँ मभन्दा पहिलेदेखि नै कांग्रेसको राजनीति गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसकेको मान्छे हो । उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– म बागी हुँदै हैन । भरतपुरमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार उठेको भए पो मलाई बागी भन्न मिल्थ्यो भन्नुहुन्छ उहाँ । म स्वतन्त्र उठेको छु भन्नुभयो उहाँले । हामीले जगन्नाथजीलाई भेट्यौं । उहाँले भन्नुभयो– चितवन सधैं कांग्रेसले छोड्ने हो भने किन यहाँ कांग्रेसको वातावरण बनाउने ?
चितवन गएर सभापतिले माओवादीलाई नजिताए पार्टी दुर्घटनामा पर्छ भन्नुभयो । अवस्था त्यस्तै हो र ?
डिटेलमा कसले के भन्यो म जान्दिनँ । यो स्थानीय निर्वाचनको परिणामले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कुनै असर पर्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । रेनुले हार्नुभयो भने गठबन्धनमै समस्या पर्छ भनेर प्रचण्डजीले किन भन्नुभयो मैले बुझ्न सकेको छैन । त्यो भन्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन ।
कांग्रेसलाई थर्काएको हो कि त ?
चितवनका कांग्रेसीहरूले भोट दिन्छौं भनेकै छन् त । रेनुजीलाई जिताउन पूर्वसभापति लगायत सबैजना लागेकै छन् त, किन चिन्ता गरेको ? तर जगन्नाथजी थर्काएर थर्किने मान्छेचाहिँ हैन । उहाँ आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहेर बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले स्वतन्त्र उठ्ने निर्णय लिनुहुँदा चितवनका साथीहरूसँग धेरै सल्लाह लिनुभयो होला । निर्णय लिइसकेपछि त्यसबाट पछि हट्ने उहाँको स्वभाव छैन ।
सभापतिजीले भन्नुभएको कुरा मलाई कताकता अप्ठ्यारो लाग्यो । गठबन्धन नभएको भए म सभापति नै हुँदैनथिएँ भन्नुभएछ । यो नेपाली कांग्रेसका लागि दुःखदायी कुरा हो । उहाँले बोल्नुपर्ने कुरै हैन यो । गठबन्धनले उहाँलाई सभापति बनाएको हैन । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भोट हालेर उहाँलाई सभापति बनाएको हो ।
उत्कृष्ट गाउँपालिका कैलारीको चुनावमा प्रतिष्ठाको लडाइ, पुरानै प्रतिस्पर्धी आक्रामक
सत्ता गठबन्धनबीच कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा चुनावी तालमेल भएको छ । गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य उम्मेदवार बनेका छन् । नेकपा एमाले भने एक्लै चुनावी मैदानमा छ । सत्ता गठबन्धनको सामना ग...